ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - Shijiazhuang Osprey Tools များ Co. , Ltd မှ
Sintered စိန် Blade စော
လေဆာဂဟေစိန် Blade စော
စိန်ကွိ & ပိုလန် Tools များ
PCD ဖလားဘီး / PCD
Shijiazhuang Osprey Tools များ Co. , Ltd မှ Shijiazhuang အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းတွင်တည်ရှိသည်။ 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းက Osprey Tools များစိန် tool များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှသူ့ဟာသူခွငျးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်အကွာအဝေး, pads polishing, ဖိနပ်ကြိတ်, ဘီးကြိတ်, core ကိုလေ့ကျင့်ခန်း-bits စိန်မြို့ပတ်ရထားလွှဓါးသွားကိုဖုံးစတာတွေ Osprey Tools များ 30 ရက်တရုတ်ပြည်ရှိပြည်နယ်များနှင့်မြောက်အမေရိက, ဥရောပ, Oceania နှင့်အခြားဒေသများမှပို့ကုန်ဖုံးအုပ်အရောင်းကွန်ယက်ကိုရှိပါတယ်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အပြင် Osprey Tools များ OEM သို့မဟုတ် OEM စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတော်များများဖောက်သည်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်။ အစာရှောင်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နှစ်ပေါင်းပြီးနောက် Osprey Tools များယခုစိန် tool များ၏ဦးဆောင်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး, သူကအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနဲ့ကောငျးတဲ့ဂုဏ်သတင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။
Osprey Tools များပရော်ဖက်ရှင်နယ် R & D, QC, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရောင်းအသင်းစသည်တို့နှင့်အတူ 20000 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်း, စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း 150. ကိုကျော်အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ sintering လိုင်း, brazing လိုင်း, လေဆာဂဟေလိုင်းအပါအဝင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအော်တိုသို့မဟုတ် semiautomatic ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအဆောက်အဦရှိပြီး , ခိုင်မာသော Analyzer, သိပ်သည်းဆ Analyzer, ချိန်ခွင်လျှာ tester, စမ်းသပ်ခြင်းလယ်ကွင်းစသည်တို့ကို
နှစ်စဉ် Osprey Tools များ R & D အတွက်၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်ဝင်ငွေရဲ့ 10% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ R & D ကိုအသင်း 10 နှစ်ကျော်တစ်ဦးပျမ်းမျှအတွေ့အကြုံကိုရှိပြီး, စိတ်ကြိုက်တောင်းဆိုမှုများမှလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့သည်။ R & D ကိုအင်ဂျင်နီယာများကပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှု, ဒီဇိုင်းကိုအကြံဉာဏ်နှင့်စစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူဖောက်သည်များကိုသူတို့ကို enable ရသောစိန်ကိရိယာများ, အမျိုးမျိုးလျှောက်လွှာအခြေအနေများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအပေါငျးတို့သဖောက်သည်သာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များလက်ခံရရှိကြောင်းသေချာ, IQC, IPQC, FQC ပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုစသည်တို့အပါအဝင်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်, ရှိပါတယ်။ တင်းကျပ်သောစာရွက်စာတမ်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူနည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖောက်သည်အချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအာမခံနေကြသည်။
Osprey Tools များ, စိန် tools တွေကိုသင့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်, သင်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်လင့်!
Douyu စက်မှုပန်းခြံ, Luancheng ခရိုင်, Shijiazhuang 051430, တရုတ်